Jolay 2014 - Websetnet
Isam-bolana: Jolay 2014
Mandrosoa haingana ny sarin'ny Time miaraka amin'ny Plugins fanentanana
Mampalahelo anao ve ny halaviran'ny tranonkala WordPress anao? Raha toa ianao ka efa niaina fotoana vitsy kokoa, dia makà fotoana hanatsarana ny haavon'ny tranonkalanao WordPress. Afaka manatsara ny tranokalanao amin'ny fomba maro ianao, ...
Afaka mamorona tranonkala tsara ve ianao raha tsy misy backlinks?
Ny Backlinks dia mety ho ny loza mitatao indrindra indrindra, ny singa be loatra amin'ny valin'ny SEO. Amin'ny lafiny iray, afaka mahazo ny valisoa ianao; fanombatombana be loatra ao amin'ny Google izay saika tsy takatry ny fandroahana. Tranonkala iray, raha vantany vao tonga eo amin'ny sehatry ny fahefana azo itokisana, dia lasa fitaovana maharitra mandrakizay ...
Ny Lisitry ny Design Web Design Ultimate Incredibly
Ny famolavolana tranonkala dia mety ho sarotra, eny fa na dia ho an'ireo efa ela aza. Misy karazana faniriana maro tadidinao, ary misy fototra maro hafa izay mila henoina aloha kokoa noho ilay famolavolana fantatra amin'ny anarana hoe farany. Mpamorona tranonkala mety ho ...
Lisitry ny fanamafisam-peo amin'ny pejy
Ny ankamaroan'ireo orinasa dia tsy miraharaha an'io lafiny manan-danja amin'ny Search Engine Optimization io. Ny ankamaroan'ny tranonkala tranokala ao amin'ny tranonkala dia tsy miraharaha ny ampahany tena ilaina ao amin'ny SEO-pejy. Hanao dingana tsikelikely ny endri-javatra manan-danja rehetra ao amin'ny SEO On-Page. Ireto manaraka ireto ny maromaro amin'ireo hevitra fifadian-kanina izay hanampy anao ...
11 amin'ny lahatsary Instagram tsara indrindra tamin'ny Jolay 2014
Ity no andro farany an'ny Jolay, izay manoro hevitra fa fotoana izao hijerena indray ny lahatsary Instagram tena tsara indrindra izay hitanay nandritra ny herinandro teo aloha 4 na izany. Tamin'ity fotoana ity dia nahazo fandraisana an-tsoratra avy amin'ny Samsung, Nike Skateboarding, KFC, National Geographic , American Apparel, ...
Horonan-tsarimihetsika Video Optimization SEO hanampy hampitombo ny fahitana ny sarimihetsika amin'ny tranonkala media sosialy toy ny Youtube, Vimeo ary ny maro hafa. Google, Bing ary Yahoo dia nanomboka ny fampisehoana sarimihetsika ao anatin'ny valin'ny fikarohana. Isaky ny mikaroka izay fehezanteny manan-danja indrindra ianao dia ho ...
Ahoana ny fomba hanatsarana ny teti-bola an-tserasera?
Ny orinasa madinika, na orinasa iray amin'io lafiny io, dia hitady izay fomba rehetra hanaovana dokam-barotra mety sy mahasoa. Mihazakazaka ny fampielezan-kevitra, ampiasaina ny manampahaizana manokana, ary fitaovana maro be ampiasaina mba handinihana ny orinasa. Miaraka amin'ity hetsika rehetra ity, dia ...
Ny algorithm Algorithm Google Search Update
Misy Algorithm Google vaovao ao an-tanàn-dehibe sy ny Search Engine Land izay miantso azy Pigeon. Satria ity karazana algorithm ity dia mitarika ny fikarohana karazana ary toa voromailala dia maniry ny manidina indray ao an-trano. Yeah. Izany no nolazainay koa. Asio ilay horonan-tsary mihetsiketsika. Na izany aza, miaraka amin'ny ado fanampiny fanampiny eto ...
Nanimba ny tranonkalanao ve i Google? SEO afaka manampy
Ny fikarohana ara-panatanjahan-tena dia orinasa iray mandoza izay manohy manam-pahaizana haingana be amin'ny lazany, noho ny ezaka goavana nataon'ireo injeniera Google mba hamoronana valiny hafa momba ny fikarohana sy ara-voajanahary ho an'ny mpanjifa. Miaraka amin'ny fanavaozana mivaingana sy ny fifandraisana amin'ny algorithm, Google dia manandrana manao ...
Nginx izao ny mpizara tranonkala #1 ho an'ireo tranonkala malaza indrindra 10k!
Nginx dia malaza be ary ny tranonkala malalanay. Faly izahay mahita fa amin'ny tatitra fanadihadiana vaovao avy amin'ny w3techs.com, ny fampiasana nginx dia mihamitombo amin'ny taham-pahavitrihana. Tsy ampy herintaona lasa izay dia nahatonga ny nginx ho lasa mpizara tranonkala #1 ho an'ny tranonkala 1000 ambony. As ...
Hampiditra Apache2, MariaDB sy PHP5 Fanohanana ao CentOS 7
Omaly no nametrahako CentOS 7 mba hitsapana izany. Androany, hasehoko anao ny fomba fametrahana LAMP Stack (Linux, Apache2, MySQL (MariaDB) ary PHP) ao CentOS 7. Ity lesona fampianarana ity dia tokony ho tsotra sy tsotra, ary ho an'ireo izay vaovao amin'ny CentOS dia tokony hanana ...
Ny Setup Simple Web Server dia manome torolàlana mba hisorohana ny fanafihana iombonana
Maro ny zavatra azonao atao mba hahazoana antoka fa tsy nosokafana ny tranonkala na ny bilaogy ho an'ireo hackers hiditra sy hangalatra na hamotika ny rafitrao. Raha toa ianao ka mahavita bilaogy mahomby amin'ny aterineto, dia ny zonao no tena lasibatra. Mba hisorohana ny sasany amin'ireo tsotra ireo ...
Ampidiro ny rakitry ny Nginx sy ny fametrahana Nginx amin'ny CentOS 7
Ity lesona fohy ity dia hampiseho anao ny fomba fametrahana ny tahirin-tsarin'i Nginx sy ny fametrahana Nginx amin'ny CentOS version 7. Raha mamaky izany ianao dia mety tsy misy zavatra na roa momba an'i Nginx. Ho an'ireo izay tsy mahalala, Nginx dia tranonkala iray izay haingana ...
Mamorona sy mampifanaraka ny anjaran'ireo Samba ao amin'ny CentOS 7
Ity misy lesona iray mampiseho anao ny fomba ahafahanao mampiasa Samba amin'ny 7 ary mamorona loham-piraketam-pandrafetana manana alàlana ahafahana miditra ao anaty tambajotra anaty tambajotra. Ohatra, raha manana tranokalam-pandehanana goavam-be ianao, dia afaka mamorona angona maromaro ...
Mamorona Serba File Server ao Ubuntu 14.04
Ity lesona fohy ity dia hampiseho anao ny fomba hamoronana loham-pifandraisana Samba ary hamela ireo solosaina mpanjifa mba hiditra amin'ny rakitra miaraka amin'ny ambaratonga isan-tsokajiny. Amin'ity lahatsoratra ity, dia hamorona karazan-drakitra telo miaraka amina rindranasa samihafa. Ny lahatahiry iray ifampizarana dia hamela ny rehetra ...
Ahoana no hametrahana LAMP (Linux Apache, MariaDB & PHP) amin'ny CentOS 7
Ao amin'ny lahatsoratra manaraka dia hasehontsika anao ny fomba hametrahana LAMP (Linux Apache, MariaDB & PHP) amin'ny CentOS 7 VPS. Inona no LAMP? Ny LAMP dia tena loharanon-kevitra ho an'ny solosaina miaraka amin'ny Linux, ny Apache HTTP Server, ny MySQL na ...
Ahoana no hametrahana LAMP ary hazavao osTicket amin'ny CentOS 6 VPS
Amin'ity lesona manaraka ity dia haneho anareo ny fomba ahafahanao manamboatra sy manangana LAMP (Linux Apache MySQL sy PHP) ao amin'ny 6 VPS anao ary manamboatra ny tenanao, manohana ny tsindrona powered by osTicket. Inona ny osTicket? Izy io dia loharanom-baovao fanamafisana mivantana. ...
Ahoana ny fametrahana OwnCloud 7 amin'ny Ubuntu 14.04 VPS
OwnCloud dia tranonkala mifototra amin'ny fitantanana ny tranokala ary mizara vahaolana. Amin'ny fampiasana ny OwnCloud dia ahafahanao manitsy sy mizara ny rakitra, kalandrie, fifandraisana, sns ... ary ahafahanao miditra mora foana amin'ny fitaovana rehetra avy any amin'ny toerana rehetra. Ao amin'ity lahatsoratra bilaogy ity dia hametraka ny OwnCloud 7 amin'ny Ubuntu 14.04 VPS. ...
Ahoana ny fametrahana LEMP (Linux, Nginx, MariaDB & PHP-FPM) amin'ny CentOS 7 VPS
Ny lahatsoratra manaraka dia hanaraka anao amin'ny alàlan'ny fomba fametrahana LEMP (Linux, Nginx, MariaDB & PHP-FPM) amin'ny iray amin'ireo CentOS 7 Linux Virtual Servers. Raha tsy izany, mitady ny fomba hananganana LAMP ianao, dia azafady mba lazao ny torolalantsika momba ny fomba ...
Cpanel - Nisy olana iray nanesorana ilay subdomain
Tsy vitako ny nanala ny subdomain avy amin'ny Cpanel izay nanome ahy ny fahadisoana: Nisy olana iray nanesorana ny subdomain Mba hamahana ilay olana nataoko ireto dingana manaraka ireto: 1. Manorata ireto rakitra manaraka ireto: / var / cpanel / userdata / username / main /var/cpanel/userdata/username/sub.maindomain.com / var / cpanel / users / username /var/named/maindomain.com.db/ var / cpanel / userdata / wineinns / sub.domain.com /var/cpanel/userdata/wineinns/sub.domain.com.cache /usr/local/apache/conf/httpd.conf 2. Fafao daholo …
1 2 3 4 ... 11 Manaraka
Hamaha ny NMI_HARDWARE_FAILURE BSOD amin'ny Windows 10 / 8 / 7
PyCharm 2018.3 dia navotsotra niaraka tamin'ny WSL, Multiline TODOs Support
Ahoana ny fametrahana ny tambajotra sosialy Elgg amin'ny Ubuntu 18.04 LTS
Ahoana ny fametrahana Etherpad Collaborative Real Time Editor ao amin'ny Ubuntu 18.04
Ahoana ny fametrahana sy ny fanoratana ny OrangeScrum amin'ny Ubuntu 18.04 LTS
Ahoana ny fametrahana CMS Elxis amin'ny Ubuntu 18.04 LTS
Active XSS manafihana taratra ho an'ny WP WordPress Plugin
Skype antso an-telefaona ankehitriny azo ampiasaina amin'ny Amazon Alexa
Ny Microsoft Whiteboard dia manomboka amin'ny mpanjifa ny fanabeazana amin'ny endrika vaovao vaovao
Instagram Farany dia mametraka ny hamam-piadiana amin'ny sandoka sy ny mpanaraka
Afaka miditra ao amin'ny kaontinao Microsoft ianao raha tsy manana Password
Fotoana fohy ho an'ny Snap mba hanamafisana sary roa
Samsung's Next Galaxy S Flagship mba hanana camera enina, famerenam-bahaolana tsy an-kiato, ...
Ny iray farany ampiasain'i OnePlus Open Beta 6 dia manampy ny fanatsarana vaovao
Fa mitsangana kosa ny Pixel 3 hafa
5 zava-dehibe aloha alohan'ny hanombohana fampiroboroboana ny mailaka amin'ny orinasa
'App (501) 10 (417) paoma (1165) bilaogy (576) CentOS (323) Chrome (344) Unité centrale (315) Database (474) fitaovana (318) Facebook (577) Toetoetra (298) Firefox (341) lalao (573) Google (1483) HTTP (548) HTTPS (422) iPhone (978) Linux (1517) Microsoft (472) One ' (497) loharano misokatra (388) Rafitra fikirakirana (688) Phone (335) PHP (324) PPA (512) ram (488) MAMAKA (554) SEO (322) Server (1146) finday avo lenta (595) haino aman-jery sosialy (333) fifamoivoizana (353) Twitter (452) Ubuntu (1333) Ubuntu 14.04 (521) ubuntu 15.04 (411) vaovao farany (402) USB (513) Users (380) web browser (446) Windows (2353) Windows 8 (387) Windows 10 (750) WordPress (344) YouTube (329)